Jurgen Klopp: “Waan u sheegay Mario Balotelli inay qasab ku tahay inuu ka tago Liverpool” – Gool FM
Jurgen Klopp: “Waan u sheegay Mario Balotelli inay qasab ku tahay inuu ka tago Liverpool”
(Liverpool) 13 Luuliyo 2016 – Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday in Mario Balotelli uu u baahan yahay inuu isaga tago Reds oo ay qasab ku tahay inuu koox cusub u wareego.
Balotelli oo Liverpool kaga soo biiray kooxda AC Milan sanadii 2014-kii ayaa kaddib markii uu dhaliyay kaliya 1 gool oo Premier League ah 16 kulan uu kooxda u saftay, waxa uu sanadkii ku xigay amaah dib ugu laabtay garoonka San Siro.
Inkastoo uu muddo saddex bilood ah uu dhaawac gumaarka ah ku maqna 25-sano jirkaan ayaa kaliya 1 gool dhaliyey horyaalka Serie A xilli ciyaareedkii hore, macallin Klopp ayaana Mario ugu jirin qorshiisa kooxda Liverpool, isagoo xusay inuu Mario u sheegay inuu isaga tago Reds.
“Marka aan samaynaynay tababarka, kubadda madaxa iyo waxyaabaha la mid ah waxa uu ahaa mid cajiib ah, laakiin xaaladdan ma’ahan midii uu hal boos kula dagaalamayay ciyaartoy kale, sidaasi darteed waa ay iska caddahay inaan xal u baahannahay.” ayuu yiri tababare Klopp.
“Waxaa jiri doonta koox ku faraxsanaan doonta inay hesho Mario Balotelli-ga cusub, haddii aan sidaas u dhigo, si cad ayaan ugala hadlay ciyaaryahanka arrintaas.”
“Waxaa la joogaa waqtigii go’aanno la gaari lahaa, waxaana isku dayayaa inaan ka caawiyo Mario inuu qaab ciyaareedkiisa dib u helo, waana arki doonaa waxa dhaca.” ayuu hadalkiisa ku soo xiray macallinka reer Jarmal.
Jose Mourinho oo indhaha ku haya soo xero gelinta Cesc Fabregas… (Miyey ku midoobi karaan Man United?)